Ikhabhinethi yaBucala enebhafu eshushu kunye nedekhi. Iimbono ezimangalisayo zeNtaba.
Ikhabhinethi yethu yelog ibekwe kwiihektare eziyi-118 zentlango yaseAdirondack. Iimbono ezimangalisayo zeentaba ezibonwa kwindawo yethu enkulu enefenitshala ejikeleze umgangatho. Yonwabela ukuzola kunye nobumfihlo bentlango ejikelezileyo kunye nentuthuzelo yokwenyani enokuthi ivele kwikhabhathi yelog. Coca kwaye ukhululekile ngazo zonke izinto eziluncedo. Ibhafu eshushu, indawo yomlilo, inkundla yebhasikithi kunye neengca eziphangaleleyo. Imizuzu elishumi ukuya kwiZiko leMt. Ski, iiyure ze-1.5 ukuya eLake Placid, imizuzu engama-30 ukuya eLake George Village, kunye neyure enye ukuya eSaratoga Springs.
Indawo yokuhlala ebanzi enokukhanya okumangalisayo kwendalo. Iifestile ezibanzi kwaye zininzi kunye nengaphakathi legolide lepine zenza umoya ofudumeleyo oqaqambileyo ukuze ukonwabele nabahlobo bakho kunye nabo ubathandayo. Ikhaya libonelela ngegumbi lokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye namagumbi okuhlambela amabini, kunye neendawo zokulala ezine ezipholileyo kunye nomdlalo omkhulu kunye nendawo yokusebenzela kunye nokuzonwabisa. Umngangatho omkhulu ojikeleze umnganga kunye ne-tub eshushu kunye neembono ezintle zeentaba. Ilungele ikofu yasekuseni okanye i-cocktails yangokuhlwa. Ingca ebanzi kunye nenkundla yebhasikithi. Ifanelekile kwiintsapho ezinkulu okanye amaqela abahlobo abafuna ukonwabela amava e-Adirondack.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-3
Indawo yethu yabucala kunye nethe cwaka yamahlathi ibekwe kwindlela emfutshane yeGore Mountain Ski Centre, kunye nenani lamachibi amahle e-Adirondack, kubandakanya iLake George. Kwakhona ngaphantsi kweyure drive ukuya Saratoga Race Track and Casino .
Ilungu losapho olunomkhosi liya kufumaneka ekuhlaleni ukuba iindwendwe zinemibuzo okanye iingxaki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Johnsburg